‘रामकहानी’ मा जीतु भिलेन !
काठमाडौं– हाँस्यकलाकार जीतु नेपाल भिलेनको रुपमा देखिने भएका छन् । २२ भदौबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘रामकहानी’मा उनी भिलेनको रुपमा देखिन लागेका हुन् । प्रदर्शन मिति नजिकिदै गर्दा निर्माण चलचित्रको सस्पेन्सहरु विभिन्न तरिकाबाट खुल्दै गइरहेको छ ।
भिलेनको बिषय पनि चलचित्रका मुख्य कलाकार जीतु नेपालले एक टेलिभिजन कार्यक्रम खुलाएका हुन् । ‘रामकहानी’ मा आफू पहिलोपटक भिलेनको अभिनयमा उत्रिएको उनले बताएका थिए । होचा कदका उनी भिलेन बन्दा कस्तो होलान् ? दर्शकको प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।
अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठ अभिनित चलचित्र हाँस्यकलाकारले समेत भरिएको छ । जीतुको अलवा चलचत्रिमा केदार घिमिरे, विल्सन विक्रम राई, रविन्द्र झा, राजाराम पौडेल लगायतको समेत अभिनय रहेको छ ।
कमेडीसँगै रोमान्टिक लभस्टोरी जनरामा निर्माण भएको बताइएको चलचित्रको ट्रेलरमा हरर समेत मिसिएको छ । बाहिर आएका बाहेक निर्माण टिमले अन्य पात्रको भूमिकालाई सस्पेन्सनै राखेको छ ।
सुदर्शन थापाको लेखन निर्देशन रहेको ‘रामकहानी’ मा बनिश शाह र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन छ ।
Previous दीपिकासँग रोमान्स गर्न नवलपरासी पुगे दिपक
Next विकासलाई दिइन् बर्षाले धोक